| चित्रकलालाई थाँती राख्दै होटल व्यवसायमा
मेचीकाली : 2010-05-23 16:07:23
विगत केहि महिना अघिसम्म चित्र कोरेर बस्ने धुलिखेल नगरपािलका - २ सरस्वती बजारका अशोक व्यान्जु अहिले 'एसक्युज मी हजुरहरुलाई के सेवा गरौ' भन्दै ग्राहकसंग सोध्नमा व्यस्त देखिन्छन् । विगत तेह्र वर्षदेखि चित्रकलामा लागेका व्याञ्जु अहिले चित्रकलालाई अलि पर राख्दै होटल व्यवसाय संचालनमा लागेका छन् । वि.स. २०३९ सालमा धुलिखेल नगरपालिका- २ सरस्वती बजारमा स्वर्गिय मातापिता नानीमैँया व्याञ्जु र अम्बरबहादुर व्यान्जुको कोखबाट जन्मेका व्याञ्जुले विगत तेह्र वर्ष अघिबाट चित्रकलामा हात अघि बढाएका व्याञ्जुको चित्रकलाबाट मन सन्तुष्ट भएपनि पेट सन्तुष्ट नभएकोले चित्रकलालाई थाँती राखेर पेटकै खुसीको लागि आफ्नै घरमा खाजा होटल स्थापना गरी व्यवसाय अघि बढाएको बताउँछन् ।
खाली समयमा गित सुन्दै कापीमा चित्र कोर्न सुरु गरेको बताउने व्याञ्जुले सिक्दा सिक्दै नसोचेको सफलता हाँसिल गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन् 'मैले ५ र ८ कक्षा पढ्दाखेरी भएको जिल्ला स्तरिय चित्रकला प्रतियोगितामा प्रथम भएपछि मलाई अघि बढ्न झन हौँसला प्रदान गर् यो' व्याञ्जु थप्छन् ।
एसएलसी सकेपछि चित्रकलाको तालिम दिनको लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको अनुरोधमा तीन महिने तालिम दिएको उनी स्मरण गर्छन् । '२०६० सालमा घरेलु तथा साना उद्योग विभागबाट तालिमको प्रस्ताव आयो र काठमाडौ गएर तीन महिने चित्रकलाको तालिम दिने मौका मिल्यो' उनले भने ।
विभागबाट तालिम दिइसकेपछि उनले ललितपुर भक्तपुर हेटौडा लगायतका ठाउँमा गएर चित्रकला सम्बन्धि तालिम दिएको बताउँछन् । ' म युवा थिएँ चित्रकला सिक्नेमा महिला विद्यार्थी बढी हुन्थे' उनी सम्झन्छन् । आफुले चित्रकला सम्बन्धि कुनै तालिम नलिएकोले विद्यार्थीहरुलाई चित्रकला सिकाउनका लागि म आफैले सिक्नुपर्ने भएकाले उनले राम्रो गर्न सकेको बताए ।
कहिले काँहि उनले सिकाएका विद्यार्थीले चित्रकलामा राम्रो गरेको समाचार तथा कुरा सुन्दा व्याञ्जुलाई खुसी पनि लाग्छ रे । 'अहिले मैँले नै सिकाएका विद्यार्थीहरु मँ भन्दा धेरै माथि पुगेका छन् उनीहरुको राम्रो भएको खबर थाहा पाउँदा खुसी लाग्छ' उनी थप्छन् । उनले हालसम्म करिव चार सय जनालाई चित्रकला सम्बन्धि तालिम प्रदान गरेको बताउँछन् । 'चित्रकलामा पैँसाको लगानी भन्दा बढी समयको लगानी गर्नुपर्छ' उनले भने । एउटा चित्र पुरा निर्माण गर्नका लागि तीन महिनासम्म खर्चिएको व्याञ्जुको अनुभव छ । हालसम्म उनले एउटा चित्र एक सय रुपैँया मूल्यदेखि एक्काइस हजार मूल्यको चित्रहरु बिक्री गरेको बताउँछन् । 'मैले बनाएको बुद्धको जीवन चक्रको चित्र नै सबैभन्दा बढी मूल्यमा विक्री गरेँ' उनले थपे ।
कतिपय मानिसहरुले चित्रकला बनाएपछि प्रशंसा गरेपनि किन्ने वेलामा भने चित्रमा प्रयोग भएको छ्वाली र वालुवासंग तुलना गर्ने गरेको उनी सम्झन्छन् । पहिलेको कुरा स्मरण गदैँ व्याञ्जु भन्छन् 'कसैकसैले तेरो चित्रमा पचास रुपैँयाको वालुवा र छ्वाली लागेको छैन पाँच सय मोल्ने भनेर आरोप लगाउँथे'। करिव चौध वर्षको अवधिका व्याञ्जुले साना ठुला गरेर करिव एक हजार दुई सय जति चित्र कोरेको दावी गर्छन् । 'अहिले मैले नै चित्र कला सिकाएका भक्तपुरका सिताराम गोसाइँ म भन्दा धेरै माथि पुगेका छन् उनको प्रगती देख्दा साह्रै खुसी लाग्छ' उनी थप्छन् ।
विगत चार महिनाबाट चित्रकलालाई अलि पछि सादैँ होटल व्यवसाय संचालन गरेका व्याञ्जुको व्यवसाय सन्तुष्टिजनक रहेको छ । 'मेरो होटल व्यवसायबाट मलाई राम्रो नै भएको छु' उनले थपे । अहिले व्याञ्जुले होटल व्यवसायबाट नै आफ्नो परिवार चलाउँद आएका छन् । कतिपय युवाहरु विदेश गएर आउने बेलामा विग्रेको बताउँदै व्याञ्जु भन्छन् 'यहाँबाट गएका थोरै युवाले मात्र राम्रो प्रगती गरेका छन् भने अरु विगि्रएर नेपाल फर्केका देखेको छु '। विदेशको लागि लगानी गर्ने रकम यहि स्वदेशमा नै लगानी गर्न सकेमा विदेशको भन्दा धेरै राम्रो गर्न सकिने उनी बताउँछन् । अहिले पनि आफुले फुस्रदको समयमा चित्रकला पनि गर्ने गरेको बताउँछन् ।
अहिले उनको होटलमा केहि ग्राहक उनको होटलमा राखेको चित्र हेर्नकै लागि भएपनि चिया र कफी आउने गरेको व्याञ्जु बताउँछन् । 'मानिसहरु मैले बनाएको चित्र देखेर दङ्ग पर्छन' उनी सम्झन्छन् । ग्राहकहरुले होटेलमा सजायका धेरै चित्र किनेर लगिसकेको उनी बताउँछन् । विगतको तुलना आजभोली चित्रकलामा धेरै मानिसले रुचि राखेको उनले बताए । 'मानिसले चित्रकलाको प्रशंसा गरेपनि चित्रकलाले घर सजावट गर्न जानिसकेका छैनन्' उनले भने ।
'अहिले धुलिखेल उद्योग वाणिज्य संघले कुनै व्यक्तिलाई मायाँको चिनो प्रदान गर्नु परेमा व्याञ्जुले नै निर्माण गरेको चित्र गिफ्ट दिने गरेको छ यसले गर्दा मलाई धेरै खुसी लागेको छ' उनी भन्छन् । प्रायजसो व्याजुको चित्र माया झल्कने खालको पाइन्छ । 'प्रायजसो म मन दुख्ने खालको चित्र बनाउँछु' व्याञ्जु बताउँछन् । व्याञ्जुले चित्रकलाको आम्दानीबाट नै कक्षा नौदेखि स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेको सुनाउँछन् ।
deepak thapa:May 23, 2010 06:44:58 PM
अशोक ब्यन्जु नगरपालिका को उपमयोर होएना र कुनै जमाना को ??